ANKAFIZO NY DIA – Blaogin'i Voniary
Marina fa tanjonao ny ho tonga amin’ny toerana iray. Azonao atao anefa ny maka tsirony eny an-dàlana. Omeo lanjany mitovy amin’ny tanjona tianao ho tratrarina ny làlana ahatongavanao amin’izany.
MARO NY VOKA-TSOA AZO MANDRITRA NY DIA
Nifampitantara ny fialan-tsasatra izahay mpinamana indray andro izay. Mailaka ery aho nilaza fa nanao lava alina : « tsy hitahita akory ny nialana teto Antananarivo dia poa tahaka izay dia tonga tany Mahajanga. Natory foana manko aho nandritra ny dia. Ny maraina nanokatra ny masoko aho, efa manakaiky ny tanana hitodiana izahay. » Hoy kosa ilay namako hoe : « Ny ahy aloha aleoko mandeha amin’ny atoandro e ! amin’izay mahita ny tontolo mahafinaritra eny an-dàlana sy ny fiovana isan-karazany : ny tanan-dehibe mivadika ambanivohitra, ny ala miova tanety, ny kininina lasa satrana. Mahavariana ahy mihitsy ireny. Fa mahafinaritra koa ny miantsona kely indraindray, mividy izay sakafo mampiavaka ny tànana iray : tono akoho, masikita, mofo mangahazo sy ny sisa. » Tonga saina aho hoe tena marina izany. Toy izany koa eo amin’ny fiainana, ny làlana ahatongavanao amin’ny tanjona iray dia manan-danja koa. Mety fijaliana no sedrainao, mety fiaretana esoeson-teny sy fanatsatsoana no iainanao. Fa amin’ireny kosa no ahatsapanao ny tena herim-ponao sy ny fanantenanao. Mandritra ireny fotoana ireny koa no ahitanao ny tena namana sy havana tsy manary sy manampy anao lalandava. Ary rehefa tafita ianao dia misy hafaliana lalina anaty satria mandray ny vokatry ny fikirizanao sy ny valin-kasasaranao ianao. Hoy Wawa, ilay mpanakanto malaza eto amintsika « Izy koa ti-hiakatra agnabo, mila manonga l’escalier fa anatin’ny ascenceur tsy mahita raha ».
BETSAKA NY FOTOANA LANY ENY AN-DALANA
Arakaraka ny mahalavitra ny toerana alehanao no mahaela ny fotoana ahatongavanao any. Ary arakaraka ny maha-avo ny tanjonao no ilàna fotoana betsaka hanatràrana azy. Noho izany maty antoka ianao raha miferinaina sy mimenomenona foana mandritra io fotoana lava be io ! Rehefa manomana litorjia amin’ny fety lehibe ao am-piangonana dia mahatsapa vizana sy lany fotoana ny tena indraindray. Velona ny fimenomenonana sy ny fahakiviana. Fa hoy izay pretranay izay hoe: « Izao fanomanana izao no tena litorjia, fa ny lamesa anie fotoana vitsy monja no lanina eo e, adiny roa eo ho eo ! Fa izao isika miara-mientana, mivezivezy isan’andro aty am-piangonana izao no tena fiainana ny litorjia.» Noho izany aza avela andalo fotsiny ny traikefa azonao, aza avela ho very maina ny fotoana laninao. Ankafizo ny dia ary ezaho ny mitrandraka izay tsara ao anatin’izany. Izay ilay fijery miabo. Na inona na inona zavatra miseho dia jereo hatrany ny lafiny tsara. Raha hanomana « mémoire » ohatra ianao, raiso mba hampivoatra ny fahaizanao mifandray amin’ny olona ny fivezivezana tsy maintsy ataonao any amin’ny tranom-boky, ivon-toerana sy birao isan-karazany. Raha mikarakara mariazy ohatra ianao, ento ampitomboana ny fifankatiavana sy ny fahaizana miara-miaina ny fikarohana ny ahatsara ilay andro iray toa zato. Raha eo am-pitadiavana asa ohatra ianao, raiso ho fialan-tsasatra mialohan’ny ikatrohanao mafy ny fotoana iandrasanao ny valin’ny fangatahanao, ka araraoty anaovana izay mahafinaritra anao.
Sarobidy avokoa ny fotoana rehetra ary misy vokany eo amin’ny fiainanao izay dingana lalovanao. Aza sodokan’ny valiny haingana fa ireny no mahatonga ho mpangalatra, mpanao tsolotra sy mpanao ratsy. Mahareta mitozo ny làlana fa tsy maintsy ho tafita ianao.
développement personnel gasy, empowerment gasy, fahaiza-miaina, fijery miabo, mpandresy ianao, toe-tsaina mpandresy